Umthetho wokuqothuka nezinqubo zawo - Law & More B.V.
Blog » Umthetho wokuqothuka nezinqubo zawo
Umthetho wokuqothuka nezinqubo zawo
Phambilini sibhale i- blog ngezimo lapho kungenziwa ukufakwa kwemali njengamanje nokuthi le nqubo isebenza kanjani. Ngaphandle kokuqothuka (okulawulwa ku-Isihloko I), i-Bankruptcy Act (ngesiDashi iFaillissementswet, kamuva ebizwa ngokuthi yi-'Fw ') inezinye izinqubo ezimbili. Okungukuthi: ukumiswa (Isihloko II) kanye nohlelo lokuhlelwa kabusha kwesikweletu sabantu bemvelo (Isihloko III, esaziwa nangokuthi yi-Debt Rescheduling Natural Persons Act noma ngesiDashi Okumanzi Schuldsanering Natuurlijke Personen 'WSNP'). Uyini umehluko phakathi kwalezi zinqubo? Kulesi sihloko sizochaza lokhu.
Okokuqala nokuphambili, i-Fw ilawula inqubo yokuqothuka. Lezi zinqubo zifaka ukunamathela okujwayelekile kwempahla ephelele yomboleki ukuze kuzuze ababolekisi. Kuphathelene nokulungiswa okuhlangene. Yize kungenzeka ukuthi kungenzeka njalo ukuthi ababolekisi bafune ukulungiswa ngabanye ngaphandle kokuqothuka ngesisekelo semibandela yeKhodi Yezinqubo Zomphakathi (ngesiDashi I-Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering noma i-'Rv '), lokhu akuyona inketho efiselekayo ngaso sonke isikhathi emphakathini. Uma kwenziwa inqubo yokulungisa izinto ngokuhlanganyela, igcina izinqubo eziningi ezihlukene zokuthola isihloko esiphoqelelayo nokuphoqelelwa kwaso. Ngaphezu kwalokho, izimpahla zalowo okweletwayo zihlukaniswe ngokulingana phakathi kwababolekisi, ngokungafani nomsebenzi ngamunye, lapho kungekho khona ukuhleleka kokuqala.
Umthetho ufaka izinhlinzeko eziningi zale nqubo yokulungiswa ngokuhlanganyela. Uma ukuqothuka kuyalwa, okweletayo ulahlekelwa ukulahlwa nokuphathwa kwempahla (ifa) ezivulekele ukubuyiswa ngokulandela i-Article 23 Fw. Ngaphezu kwalokho, akusenakwenzeka ukuthi ababolekisi bafune ukulungiswa ngawodwana, futhi konke okunamathiselwe okwenziwe ngaphambi kokuqedwa kukhanselwe (Isigaba 33 Fw). Okuwukuphela kwendlela ababolekisi ekuqothukeni ukuthi bathole izimangalo zabo ukuletha lezi zimangalo ukuze ziqinisekiswe (Isigaba 26 Fw). Kuqokwa umcwaningi wokugunyaza ukuqothuka onquma ngokuqinisekiswa aphathe futhi ahlele ifa ukuze kusizakale ababolekisi ngokuhlanganyela (Isigaba 68 Fw).
Okwesibili, i-FW inikeza enye inqubo: ukumiswa kwezinkokhelo. Le nqubo ayihloselwe ukusabalalisa imali etholwa ngumuntu okweletayo njengokuqothuka, kepha ukuyigcina. Uma kusenokwenzeka ukuphuma kulokho okubomvu futhi ngaleyo ndlela ugweme ukuqothuka, lokhu kungenzeka kuphela kumuntu okweletwayo uma empeleni ezigcina izimpahla zakhe. Umuntu okweletayo angafaka isicelo sokumiswa uma engekho esimweni lapho eyekile ukukhokha izikweletu zakhe, kepha uma ukubona kusengaphambili ukuthi uzoba sesimweni esinjalo ngokuzayo (Isigaba 214 Fw).
Uma isicelo sokumiswa sigunyazwa, okweletayo akakwazi ukuphoqelelwa ukuthi akhokhe izimangalo ezimbozwe ukumiswa, ukuvinjelwa kuqala kumisiwe, futhi konke okunamathiselwe (ukuvikela nokuphoqelelwa) kuyakhanselwa. Umqondo walokhu ukuthi ngokususa ingcindezi, kunendawo yokuhlela kabusha. Kodwa-ke, ezimweni eziningi lokhu akuphumeleli, ngoba kusenokwenzeka ukuphoqelela izimangalo ukuthi yikuphi okunamathiselwe kuqala (ngokwesibonelo uma kunelungelo lokugcinwa noma ilungelo lesibambiso noma imali ebanjiswayo). Isicelo sokumiswa kungasetha izinsimbi zama-alamu kulabo ababolekisi ngakho-ke kubakhuthaze ukuthi baphikelele ekukhokheni. Ngaphezu kwalokho, kuphela ngezinga elinganiselwe ukuthi okweletayo akwazi ukuhlela kabusha abasebenzi bakhe.
Ukuhlelwa kabusha kwesikweletu sabantu bemvelo
Inqubo yesithathu ku-Fw, ukuhlela kabusha izikweletu kwabantu bemvelo, iyafana nenqubo yokuqothuka. Ngoba izinkampani zichithwa ngokuqedwa kwenqubo yokuqothuka, ababolekisi abasenamuntu okweletwayo futhi abakwazi ukuthola imali yabo. Lokhu, kunjalo, akunjalo kumuntu wemvelo, okusho ukuthi abanye ababolekisi bangalandelwa ngabakweletisi impilo yabo yonke. Kungakho, ngemuva kwesiphetho esiphumelelayo, okweletayo angaqala ngesamba esicocekile ngenqubo yokwakhiwa kabusha kwesikweletu.
Isilayidi esihlanzekile sisho ukuthi izikweletu ezingakhokhiwe zikweletwayo ziguqulwa zibe izibopho zemvelo (Isigaba 358 Fw). Lokhu akuphoqelelwa ngumthetho, ngakho-ke kungabonakala njengezibopho zokuziphatha nje. Ukuze uthole le slate ehlanzekile, kubalulekile ukuthi okweletayo enze umzamo omkhulu ngangokunokwenzeka ngesikhathi sohlelo lokuqoqa imali engenayo ngangokunokwenzeka. Ingxenye enkulu yalezi zimpahla iyaqedwa, njengenqubo yokuqothuka.
Isicelo sokuhlenga kabusha isikweletu sizonikezwa kuphela uma okweletayo enze ngokwethembeka eminyakeni emihlanu eyandulela isicelo. Izimo eziningi ziyacatshangelwa kulokhu kuhlolwa, kufaka phakathi ukuthi izikweletu noma ukwehluleka ukukhokha kunecala kangakanani kanye nomzamo wokukhokha lezi zikweletu. Ukuthembeka okuhle nakho kubalulekile ngesikhathi nangemuva kokuqhubeka. Uma kunokuntuleka kokholo oluhle ngesikhathi sokuqhubeka, inqubo ingaqedwa (Isigaba 350 isigaba 3 Fw). Ukuthembela okuhle ekugcineni nangemva kokuqhubeka kwenqubo nakho kuyisisekelo sokunikezwa nokugcinwa kwesisekelo esihlanzekile.
Kule ndatshana sinikeze incazelo emfushane ngezinqubo ezahlukahlukene ku-Fw. Ngakolunye uhlangothi kunezinqubo zokuqedwa kwempahla: inqubo ejwayelekile yokuqothuka kanye nenqubo yokuhlela kabusha isikweletu esebenza kuphela kubantu bemvelo. Kulezi zinqubo izimpahla zomboleki zikhishwa ngokuhlanganyela ukuze kuzuze ababolekisi abahlanganyelwe. Ngakolunye uhlangothi, kukhona ukumiswa kwenqubo yokukhokha okuthi, 'ngokumisa kancane' izibopho zokukhokha kubabolekisi abangaphephile, kungenza okweletayo akwazi ukulungisa izindaba zakhe futhi ngaleyo ndlela agweme ukuqothuka okungenzeka. Ngabe unemibuzo mayelana ne-Fw nezinqubo eziyinikezayo? Ngemuva kwalokho sicela uxhumane Law & More. Abameli bethu bakhethekile emthethweni we-insolvency law futhi bayokujabulela ukukusiza!
Thumela Previous Imigomo nemibandela ejwayelekile yokuthenga: B2B
Post Next Isigaba sokungancintisani: yini okudingeka uyazi?